မဂ္ဂင် ကျောင်းတိုက် သတင်းများ | Save Burma
မဂ္ဂင် ကျောင်းတိုက် သတင်းများအပေါ် ပိုမိုနိုးကြားစေရန် ရည်ရွယ်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ရာအလိုက် လက်လှမ်းမီရာများကို စုစည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သံဃာ့သပိတ်မှာ အရေးပါခဲ့တဲ့ မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက် အပိတ်ခံရ
သံဃာ့သပိတ်မှာ အရေးပါခဲ့တဲ့ မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက် အပိတ်ခံရ (ဗီဒီယို သတင်း)
မဂ္ဂင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အပိတ်ခံရ
မဂ္ဂင်ဆရာတော်ကြီးနှင့် သံဃာတော်များ သီတင်းသုံးနေထိုင်စရာ အခက်အခဲဖြစ်နေ
မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက် ပိတ်ပင်ခံရမှုအတွက် စစ်အစိုးရအား အမေရိကန် ပြစ်တင်ရှုတ်ချ
မဂ္ဂင်ကေဵာင်း ဆရာတော်ကို နယ်နှင်ဖိုႚစီစဉ်၊ စာမေးပွဲဖြေမယ့် သံဃာတွေကို ဓၝတ်ပုံနဲႚ တိုက်ဖမ်း
သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲႚဟာ အဂတိတရားလေးပၝးကို ကဵူးလွန်နေတယ်လိုႚ ရဟန်းပျိုမဵားသမဂ္ဂအဖွဲႚ စွပ်စွဲ
မဂ္ဂင်ဆရာတော်ကို တောင်တွင်းကြီး္ဘမို့သစ် ပိုႚလိုက်္ဘပီ
မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက် ချိတ်ပိတ်ခံရသဖြင့် သံဃာတော်များ နေရာပြောင်းရ
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖဒိုမန်းရှာ လားဖန်း
“ဒီလ (၂၅) ရက်နေ့ ဘောဂလိကားလမ်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီကိစ္စ ကျနော်တို့ ကေအန်ယူကလူတွေ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့က ရဟန်းသံဃာတွေ၊ ဘာသာရေးဆရာတွေ ဒီလိုလူတွေ လိုက်သတ်နေတဲ့ သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ ရဟန်းသံဃာတွေနဲ့ သာသနာရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို လိုက်သတ်နေတာ နအဖ ပဲဖြစ်တယ်။ ဒီကိစ္စ တမင်သက်သက် ကေအန်ယူကို သိက္ခာချဖို့ သူတို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်”
“နအဖ ဟာ အကုန်လုံးကို ပြောင်းပြန် လျှောက်လုပ်နေတယ်။ မနေ့ကဆိုရင် မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်က ဆရာတော်တွေကို မောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ ဗလီတွေမီးရှို့၊ ခရစ်ယာန်ကျောင်းတွေကိုလည်း ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေလုပ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုလည်း တကယ့် ရန်သူစစ်စခန်းလို သဘောထားပြီး ၀င်ရောက်စီးနင်း သိမ်းပိုက် မောင်းထုတ်နေတာတွေ အခုထိမပြီးသေးဘူး။
အဲဒါတွေဟာ အင်မတန် စက်ဆုတ်ဘွယ်ရာကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါတွေကို ပြောင်းပြန်လုပ်ပြီး ကေအန်ယူကပဲ ရဟန်းသံဃာတွေကို သတ်နေသယောင်ယောင် လုပ်နေတာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့လုံးဝငြင်းပယ်တယ်”
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး မရပ်သေးဟု မိန့်ကြား
NEJ/ ၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇
“ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူတွေရဲ့ သွေးတွေဟာ ဘယ်တော့မှ ခန်းခြောက်သွား မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ အမြဲတမ်းရှင်သန်..
ဆက်စပ်သတင်း ဝေဖန်ချက် – သာသနာဖျက်တို့ အာဏာပြလွန်း
Myanmar junta shuts AIDS monastery
Burmese authorities have closed downaRangoon monastery they believe was very active during monk-led pro-democracy demonstrations in September
BBC Burmese Friday Dawn (30-11-2007)
A number of the monks from the monastery are reported to remain in detention (Photo: Ko Htike blog)
Burma closes HIV/AIDS sanctuary, evicts monks
The Burmese military has closedamonastery in Rangoon which had beenacentre for the treatment of AIDS patients.
Officials evicted the few remaining monks at the Maggin monastery, which has been raidedanumber of times since the pro-democracy protests in September.
It’s thought the abbot andanumber of the monks from the monastery remain in detention. …………. More
BBC Burmese Saturday Dawn (1-12-2007)
Mr Gambari on his fact finding mission in Cambodia and Laos
Gambari denounces closure of monastery used as AIDS hospice
UN envoy for Burma Mr Gambari spoke out against the closure ofamonastery in Rangoon used asahospice for HIV and AIDS patients.
Atapress conference in Cambodia he underscored that the UN has repeatedly called for the release of Aung San Suu Kyi. More
Former Time Magazine senior correspondent, David Aikman
« It’s I think one of the most corrupt, despotic gangs in charge of any country in the world. I guess they’re probably not quite as bad as Kim Jong Il in North Korea, but my hope is that the current crackdown won’t silence them completely and eventually the regime will be so embarrassed by the international pressure that it may do something to soften up. I am not particularly optimistic about this. »
ANS pointed out that some of the monks leading the revolution or the protests now they seem to have gone underground. Aikman was asked : What’s happening there ?
« Well I think that the plain fact is that the army has just been utterly ruthless with all the monasteries. They sort of closed them all down literally. They rounded up hundreds, maybe thousands of monks, took them off to detention camps. There’ve been reports that many of them were killed, executed in cold blood. So the monks have had the heart of their protests torn out of them because they’ve been just removed from the scene physically. »
Full story- Veteran TIME magazine correspondent assesses the world’s hottest …
(VOA Burmese) UN Envoy Denounces Burma’s Closure of Monastery
The United Nations’ special envoy to Burma has criticized Burma for closingamonastery the government believes was very active during recent pro-democracy demonstrations led by monks.
Tagged with မဂ္ဂင် ကျောင်းတိုက်
« EU wants Thailand to turn up the heat on Burma
World Focus on Burma (7 Jan 08) »